भुटेको कद्दू Hummus, एक राम्रो पतन स्टार्टर | ThermoRecines
एपेटाइजरहरू65 मिनेट8 व्यक्ति91२ क्यालोरी
यदि तपाईं उत्सव मनाउनुहुन्छ हेलोवीन निस्सन्देह तपाईंसँग घरमा कद्दू छ, खाली हुनको लागि। ठिक छ, आजको विधि भनेको त्यो पल्पको फाइदा लिन वा अन्य कुनै कद्दूको फाइदा लिनु हो।
हामी प्रयोग गर्न जाँदैछौं भुटेको कद्दु त्यसोभए, यदि तपाईंले हेलोवीनको पल्पको फाइदा लिनुभयो भने, तपाईंले थर्मो गिलासमा राख्नु अघि यसलाई बेक गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं अरू कुनै कद्दू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईं यसलाई पूरै भुल्न सक्नुहुनेछ, १ 180०-२०० मा र तपाईंले सक्क स्टिक सम्मिलित नगरुन्जेल यसलाई जबरजस्ती नगरीकन।
जब पल्प पूरा हुन्छ, तपाईंले सबै सामग्रीहरू राख्नु पर्छ गिलास र म्यासमा। हाम्रो मेसिनले यसको ख्याल राख्छ।
तपाईं जैतून तेल, एक सानो paprika, केहि बीउ र केहि एक बूढा बूढा को साथ hummus सेवा गर्न सक्नुहुन्छ घर बनाएको क्र्याकरहरू.
1 पम्पकिन ह्युमस
कद्दू प्रेमीहरु को लागी एक विशेष गुनगुना
कद्दू हुम्सुसका लागि:
भुटेको कद्दू पल्पको 500 ग्राम
40 ग्राम ताहिनी
कद्दू, सूर्यमुखी र / वा फ्ल्यास बीज
हामी भट्टीमा भट्टी भुईरहेछौं, १ 180० ° वा २०० at मा र यो नरम नभएसम्म। तपाईं केवल गूदे वा पूरै कद्दू भुसाउन सक्नुहुनेछ (यसलाई धुनु अघि)।
भुटेको कद्दूलाई टुक्राहरूमा राख्नुहोस्, सुक्खा छोला, ताहिनी पेस्ट, कागतीको रस, नुन र कालो मिर्चलाई सिसामा राख्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 20.
हामी हेर्छौं कि यदि सबै कुरा राम्ररी कुचिएको छ र एकीकृत छ। यदि यो थिएन भने हामी कार्यक्रम गर्छौं उही गतिमा केहि सेकेन्ड.
हामीले हम्मासलाई एउटा कन्टेनरमा राख्यौं। सेवा दिनु अघि, हामी सतहमा अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेल को थोप्लो खन्याउँदछौं, ला भेराबाट एक सानो पेपरिका र यदि हामी चाहन्छौं भने र केही बीजहरू (कद्दू, सूर्यमुखी र / वा फ्याक्स)। हामी क्र्याकरहरूसँग वा टोस्टेड रोटीको साथमा हुन्छौं।
अर्को विकल्प स्क्वाश पकाउनुको सट्टा यसलाई भुनेको भन्दा हो। यदि तपाईं यो विकल्प रुचाउनुहुन्छ भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि यो गिलासमा राख्नु अघि राम्रोसँग सुक्खा हुनुपर्दछ।
थप जानकारी - यीस्ट-फ्री क्र्याकरहरू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, हेलोवीन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » हेलोवीन » पम्पकिन ह्युमस
सोया सॉस, मह र निम्बूको साथ कुखुराको पखेटा
पद्दुको आकारको पिज्जा